Daawo: Robert Mugabe oo markii ugu horaysay meel fagaare ah lagu arkay | Kalshaale
Nov 17, 2017 - 4 Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Madaxweynaha dalka Zimbabwe Rober Mugabe ayaa markii ugu horeysay meel fagaare ah lagu arkay tan iyo markii ciidamada afgambiga ku rideen Abacadii aynu ka soo gudubnay.
Mugabe waa mujaahid duqoobey u maleyn mahayo inuu cararidoono ama la dilaa,inkastoo uu ku raagey Kursiga waxaa fiicneyd inuu kursiga ka dego ayadoo la jecelyahey sidii Saaxiibkiis Kenneth Kaunda of Mozambique.
Dictator ayuu isu bedelay African Web ma ogiye Tanaasul maleh.
** Alle ayaa ilehe Hiraab ayaa Africa ugu Tanaasul Badan.
Waakaa Caqliga @Hawiye Jaalle Siyaad mujaahid ma ahayn @mugabe na Waa loo sacaba tumayaa war nimanku @Amisom Iyo ajinabi jecelaa OK guska @zimbabwina dalbada
Asc ninkan Waa dhiigmirato dadkisii wadanka an joogo south Africa ay usobarakaceen gaajo darted iyo shaqolaan wlhi sidey udabaldegayan waad yaabi oy ukuhayan hanadhaafo wadankena ku noqonlahen isbedal baan rabnaa
Kenneth Kaunda Zambia ayuu xukumey maahayn muzambique.
Mogabe waxaa lagu haystaa habarta ku ciyaaraysa wadanka oo odayga dhaxalkiisa usoo dhigatay in meesha laga eryo ee isaga lama diidana inkasta oo uu meesha ku doqoobey oo ay ahayd waa hore inuu isaga tago sida aad sheegtay